Manamafy Ny Fotodrafitrasany Amin’ny Teknolojia i Rosia, Manapaka Ny Fifandraisana Miaraka Amin’ireo Orinasa Amerikana · Global Voices teny Malagasy
Manamafy Ny Fotodrafitrasany Amin'ny Teknolojia i Rosia, Manapaka Ny Fifandraisana Miaraka Amin'ireo Orinasa Amerikana
Voadika ny 01 Desambra 2016 9:14 GMT
Nikolay Pryanishnikov, Filohan'ny Microsoft Rosia. Loharano: Imagine Cup, Flickr. CC 2.0
Manokatra fanadihadiana an'ny Microsoft ny Sampana Federaly ao Rosia Manohitra ny Fanjakazakana, noho ny fanararaotany ny toerany lehibe eo amin'ny tsenan'ny teknolojia ao amin'ny firenena.
Voarakitra ao anatin'ireo ezaka naverin'i Kremlin mba hamoretana ireo kaompania-nà teknolojia Amerikana miasa ao Rosia io fanadihadiana nambara ny 10 Novambra io. Microsoft, Oracle, IBM, sy ireo hafa sasany dia samy miatrika lalàna mihamafy hatrany ary fandraisana fepetra hafa ataon'i Kremlin izay mandrahona ny fidiran'izy ireo amin'ny tsena Rosiana, izay manana lanja vinavinaina ho eo amin'ny 3 lavitrisa dolara.
Na hoe mbola mijanona ho rimbambaiko tena ankafizin’ireo tomponandraikitra Rosiana aza i Microsoft, izay niasa tao Rosia hatramin'ny taona 1992, manao ezaka iarahana ny governemanta mba hialana lavitra an'ilay goavan'ny teknolojia Amerikana: ny volana Septambra, natobok'i Maosko ny asa hanoloana ny rindrambaiko Microsoft tany anatin'ireo solosainan'ireo mpiasan'ny firaisana sy ny an'ireo tomponandraiki-panjakana. Nanambara ilay goavan'ny fifandraisandavitra tantanan'ny fanjakana, Rostelecom, iny herinandro lasa iny, hoe mieritreritra ny hividy rindrambaiko azo atao solon'i Microsoft izay vita eto an-toerana, My Office, izay efa nahazo tolobidy avy tamin'ireo masoivohom-panjakana folo sy ivontoerana maro tamin'ny ambaratonga samihafa. Notaterina fa efa nosoloin'ireo fandraharaham-paritra, isan'izany ny an'i Maosko, sahady ny rafitra Microsoft, Oracle ary Cisco maro, mifanaraka amin'ireo karazana asa, manomboka amin'ny fandraisana lahatsary fiarovana ka hatramin'ny fitantanana ny angon-drakitra.
Matahotra loza mitatao amin'ny fandriampahalemana, mitady fahefana mpanaramaso matanjaka kokoa
Te-hanalavitra ny tenany amin'ny fanjakazakan'ny fotodrafitrasa sy ireo vokatra teknolojika Tandrefana tantanan'ny orinasa tsy miankina i Kremlin. Fa tsy mazava tsara hoe nahoana. Matahotra ny valifaty amin'ny Aterineto mety hataon'ny Amerikana ve izy? Te-hanana fanarahamaso bebe kokoa eo amin'ny serasera sy asan'ireo mpiasan'ny governemanta ve izy? Sa ve hoe te-hanararaotra ny vintany hahafahany mikapoka ampahibemaso ny endrika iray hafan'ny dindon'ny Tandrefana any Rosia fotsiny ?
Tsy zava-baovao vao haingana mihitsy ireo hetsika ataon'i Kremlin mba hamerana ny fampiasan'ireo mpiasan'ny governemanta ny rindrambaiko vita Amerikana, fa maneho kosa anefa io hoe mampiakatra ny maripàna ny governemanta Rosiana. Hatramin'ny 2014, nampitombo foana ny famerana ny fidiran'ireo orinasa-nà teknolojia Amerikana ao Rosia i Maosko, nangataka ny fahafahany ambadika amin'ny angon-drakitra momba ireo mpampiasa (tafiditra amin'izany ny votoatin'ireo fifandraisana, toy ireo imailaka) ary nandrahona ny hanisy hetra manamora ny fandraràna ny rindrambaiko vita avy any ivelany.
Mety hoe ny tena zava-dehibe indrindra, ny taona 2015, nandany lalàna ny Douma (Antenimiera)-n'ny Fanjakana itakiana amin'ireo kaompania manana fahafahana miditra amin'ny torohay manokan'ireo Rosiana mpampiasa mba hitahiry ny angon-drakitra ao anatin'ireo lohamilina mipetraka ao amin'ny firenena. Milaza ireo mpitsikera fa mandrahona ny fiarovana ireo mpampiasa ilay lalàna, mahatonga ny governemanta Rosiana ho mora tafiditra amin'ny torohay manokan'ny olona. Mety hampisy vokatra mitovy amin'izany ihany ny fanovàna azy io amin'ny rindrambaiko vita Rosiana satria manana fifandraisana akaiky amin'ny fanjakana ireo mpamokatra ao an-toerana.
Nanome ny fanamarinana ho an'ny fitsaràna Rosiana hitazonana ny fanapahan-kevitry ny governemanta hibahana ny LinkedIn tao amin'ny firenena, tamin'ny fanombohan'ny herinandro, ny lalàna momba ireo lohamilina ao an-toerana. Maro ny mahita ilay fibahanana hoe mariky ny fampitandremana ho an'i Microsoft (izay novinavinaina ho vitaina amin'ny faran'ny taona ny fividianany ny LinkedIn) ary ireo kaompania Amerikana hafa miasa ao Rosia: na izy ireo mametraka ny lohamiliny ao an-toerana na miala ny firenena.
Mazava ny anton'ilay famoretana tamin'ny taona 2014: nandray anjara ireo orinasa Amerikana (tafiditra amin'izany i Microsoft, Google, ary Oracle) tamin'ilay fanasaziana natao an'ireo sampana ara-bola Rosiana, izay noteren'ny governemanta Amerikana natao taorian'ny fanakambanana an'i Krimea, tamin'ny alàlan'ny fampiatoana ny fanampiana an'ireo mpandraharaha sy mpanome tolotra ao amin'ilay saikinosy,
В ответ на санкции Майкрософт – Россияне будут использовать в России легально пиратское программное обеспечение.
— Remiz (@remzav) May 6, 2014
“Ho valin'ireo sazy nataon'i Microsoft – hampiasa rindrambaiko voajirika ara-dalàna any Rosia ireo Rosiana”
Fa nanome fanazavana mifanohitra momba ireo hetsika natao tsy ela akory izay tamin'ireo orinasa Amerikanaireo tomponandraiki-panjakana. Raha mino ny Minisitry ny Serasera Nikolay Nikiforov ianao, resaka ara-toekarena tsotra izao iny, mikendry ny hamiliana ireo volan'ny mpandoa hetra sy ny orinasam-panjakana ho any amin'ireo Rosiana mpamorona. Ary indrindra, hatramin'ny fitotonganana be nanjo ny rouble Rosiana ny taona 2014, lasa hita ho tena lafo tokoa ireo vokatra amboarin'i Microsoft sy ireo orinasa hafa avy any ivelany, mahatonga ny rindrambaiko eo an-toerana ho manintona kokoa amin'ny vidiny ho an'ireo Rosiana olon-tsotra mpampiasa ary ireo masoivohom-panjakana.
Raha mino an'ilay Alemàna Klimenko ianao, ilay lehilahy nampiandraiketan'i Poutine manokana ny fanoloana ny rindrambaiko avy any ivelany ary hanangona ireo hetra amin'ireo entana amidy any amin'ireo fivarotana lehibe amin'ny Aterineto tamin'ny fanombohan'ity taona ity, hahazo fanazavana somary maro loko kokoa ianao. Nanana anjara tamin'io ny toekarena, hoy izy, fa eo ihany koa ny fanakambanana an'i Krimea sy ny fitombon'ny fiahiahian'ireo mpifaninana mikasika ny fifandrindràna eo amin'ireo orinasa Amerikana sy ny vondrona mpitsikilo.
Samy mihevitra mialoha i Klimenko sy ireo Rosiana mpitoraka bilaogy momba ny resaka teknolojia fa mila dimy taona eo farafahakeliny ary mila asa be, ny fanoloana tanteraka ny rindrambaiko Microsoft. Mazava ho azy, tsy ho eo noho eo ary tsy ho tonga dia feno akory ny tetezamita ialàna amin'ireo orinasanà teknolojia Amerikana — raha mitranga tokoa izany. Miresaka ny hanolo tanteraka lohamilina sy fitaovana Microsoft miaraka aminy 600.000 i Maosko, fa mbola tsy nitady ny hanolo ny Exchange sy Outlook aminà rafitra imailaka vita eo an-toerana aloha hatreto, ho an'ireo mpampiasa miisa 6.000 ao amin'ny governemanta monisipalin'i Maosko. Na eo aza ny teritery amin'ny tokony hialàna amin'i Microsoft, tsy ho tonga dia ho vita eo noho eo ny fanovàna: nilaza ny Sekretaran'ny Fifandraisana amin'ny gazety ao Kremlin, Dmitry Peskov, ny 2 Novambra, fa ho afaka atao tsara ny fanoloana tanteraka ireo vokatra Microsoft manerana ireo masoivohon'ny fanjakana rehefa “mamoaka zavatra tena mahomby ireo mpamokatra eo an-toerana.”
Misy ihany koa, mazava ho azy, ny andraikitry ny fihetsehampo tsy tia Amerikana. Ohatra iray hafa anà ady mangatsiaka anoherana an'ireo “olona avy any ivelany” mitady hanalefaka an'i Rosia avy ao anatiny ve io fitondrantenan'ny Rosiana manolona an'i Microsoft sy ireo hafa mitovy aminy io? Sarotra ny handinika izany tsy misy fitanilàna, fa raha mamerina mijery ireo fanehoankevitr'i Klimenko, mazava fa manana anjara be ny fiahiahiana lalim-paka. Taminà tafatafa ny volana Febroary, nataony hoe “raho-mitatao amin'ny filaminam-pirenena” ny Google.
Taminà singan-dahatsoratra niparitaka be maneran-tany nitondra ny lohateny hoe “Ampitahorin'i Poutine ny CIA amin'ny Fanafarana ny Solon'ny Microsoft,” nasehon'ì Ruslan Ostashko, mpitoraka bilaogy malaza, mpomba an'i Kremlin sady mpanorina ny vohikala Politrussia.com, ny antony nampisahotaka ireo media Amerikana tamin'ireo ezaky ny Rosiana hametra ny fivarotana ny rindrambaiko Microsoft.
Может ЦРУ боится остаться без своего главного источника информации в России?[…] американскую компанию «Майкрософт» подозревают в сотрудничестве с американскими спецслужбами, и именно за это ее собираются выгнать с российского рынка государственных заказов.
Mety hoe matahotra ny CIA satria tsy hanana ny loharanom-baovaony fototra any Rosia intsony? […] ahiahiana ho niara-niasa tamin'ireo masoivoho mpikaroka baovao sy mpitsikilo ny kaompania Amerikana Microsoft, ary izany no antony iomanan'izy ireo hanalàna azy ireny any anatin'ireo fifanarahana ara-barotry ny fanjakana.
Niezaka nisintona ny fijery ho amin'ny zava-misy ireo mpitoraka bilaogy Rosiana, sahala amin'i Ostashko, amin'ny hoe CIA ihany koa no mpanjifa voalohan'ny Oracle. Anatin'ito lahatsary manaraka ito, navoaka tao amin'ny Politrussia.com, mamaky ny lahatsorany ao amin'ny bilaogy i Ostashko, izay mikasika ilay fanafarana ny fanoloana, milaza fa mizara loharanom-baovao amin'ny CIA ny Microsoft.
Araka ny asehon'ny fihetsehampon'ireo Rosiana mpitoraka bilaogy, mifanaraka amin'ny tantaran'i Kremlin mikasika ny dindo feno fitaky ny Tandrefana ihany koa ilay fanapahankevitra.
Tsy tokony ho ahilika fotsiny ho toy ny fisehon'ny faharatsian'ny fifandraisana fotsiny ny famoretana mafy atao amin'ireo orinasa-nà teknolojia Amerikana, fa ekena amin'ny maha izy azy : politika. Mikendry ny hanala ireo orinasa Amerikana any ivelan'ny rafitry ara-teknolojikan'i Rosia io politika io, hetsika izay tokony hanome fiarovana bebe kokoa amin'ny fanarahamaso teraka tamin'ny fiarahamiasan'ireo orinasa Amerikana sy ireo masoivoho Amerikana mpitsikilo, ary fanesorana ihany koa ny fitaovana fototra Amerikana raha mbola hitohy hatrany ny fanasaziana.
Ampamoahan'ny fitsarana rosiana trosa matevimbe ny orinasa media sosialy lehibe noho ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny famangitana
Fampahalalam-baovao tsy miankina nampidirina lisitry ny “kasinga vahiny” fanampiny ao Rosia